Maxaa ka taqaanaa taariikhda Abwaan Dacar? - Worldnews.com
Maxaa ka taqaanaa taariikhda Abwaan Dacar?
11 Nofembar 2018...
Taariikhda Sheekh Cabdulahi Baarakallaah oo geeriyooday
16 Sebtembar 2017...
BBC News 2017-09-16
Maxaa dhalinyarada Afrika ku kalifa inay ku biraan kooxaha xaqjirka?
8 Sebtembar 2017...
Maxaa sababa inay soo noqnoqdaan duufaannada?
9 Sebtembar 2017...
Maxaa looga hadli doona shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay?
14 Sebtembar 2017...
Maxaa ka jiraa in Somaliland la gashay bangi Shiinees ah maalgelin hal bilyan oo doolar?
2 Sebtembar 2018...
BBC News 2018-09-02
Maxaa loo fasiran karaa shirka Iskaashiga Maamul Goboleedyada Soomaaliya?
5 Sebtembar 2018...
Shay Mire Dacar oo geeriyooday
Magaalada Hargeysa waxaa galabta ku geeriyooday Allaha u naxariistee fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Shay Mire Dacar. Waxaa geerida fanaanka Shay Mire Dacar u xaqiijiyay BBC walaakiis Caabi Mire Dacar oo isna fanaan ah....
Maxaad ka taqaanaa tirada Seynis-yahnada Islaamka ee ay dishay hay’adda sirdoonka Israel
Maxaad ka taqaanaa tirada Seynis-yahnada Islaamka ee ay dishay hay’adda sirdoonka Israel. Tan iyo 1960-maadkii waxaa la aaminsan yahay in Hay’adda Sirdoonka dalka Israel ay dileen Seynis-yahno badan oo Musliniin ......
Abwaan Cowsgurow iyo Aids-ka
Maanta waa maalinta caalamiga ah ee AIDSKA, waxaana inta badan lagu soo qaadaa wacyi galin ku saabsan waxyeellada xanuunkan, sida uu qofka ugu dhaco iyo sida looga badbaadi karaba. Hasayeeshee...